त्रिभुवन विमानस्थलमा यतिको एटीआर विमान धावनमार्गबाट चिप्लियो, २ जना घाइते [अपडेट]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — त्रिभुवन विमानस्थलमा यतिको विमान धावनमार्गबाट चिप्लियो ट्याक्सी वेमा पुगेको छ । नेपालगन्जबाट ६६ जना यात्रु बोकेर काठमाडौं आएको यतिको एटीआर विमान अवतरणको क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिएर २० मिटर पर पुगेको बताइएको छ । कोटेश्वरतर्फको प्रवेश विन्दूबाट अवतरण गर्दा 'डेल्टा' नामको ट्याक्सीवे नजिककै धावनमार्गबाट चिप्लिएको हो ।
जहाज चिप्लिएको स्थान गत वर्ष विमान बंगलादेश दुर्घटना भएको स्थानबाट लगभग १०० मिटर नजिको रहेको छ।
विमानमा सवार यात्रुहरुमध्ये २ जना घाइते भएको बताइएको छ। उनीहरुलाई उद्धार गरी सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ।
We regret to inform you that Yeti Airlines Flight Number NYT-422 (9N-AMM) was involved inarunway excursion incident at KathmanduAirport at 11:05 Am today . All 66 passengers ( 64 adult and2infant) and3Flight Crew members onboard are safe and have been evacuated.
— Yeti Airlines (@FlyYeti) July 12, 2019
विमानस्थल प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार अहिले आपतकालिन संयन्त्रलाई सुचारु गरेर उद्धार कार्य भइरहेको छ। रनवेमा दमकल तथा एम्बुलेन्स पुगेका छन्।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीले जहाजको दाइने प्रोपेलर (पंखा) मा केही क्षति पुगेको बताए।
निरन्तरत वर्षा भइरहेकाले जहाजलाई निकाल्न ग्राहो भइरहेको छ। उनले जहाज चिप्लिँदा सवार यात्रुमध्ये एकजना बिरामी रहेको र थप दुईजना यात्रु घाइते हुन पुगेको जानकारी दिए। उनीहरुलाई एम्बुलेन्समा केएमसी लगिएको र हाल अवस्था सामन्य भएको एयरलाइन्सले आफूलाई जनाकारी दिएको क्षत्रीले बताए।
विमान चिप्लिएसँगै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिएको छ। जसका कारण हालसम्म ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानको अवतरण स्थगन गरिएको छ भने। उडान भर्नुपर्ने १० विमानको उडान पनि स्थगित भएको छ।
प्रकाशित : असार २७, २०७६ १३:०४
विमानस्थलद्वारा ७ बजेसम्मका लागि नोटाम जारी, उडान र अवतरण प्रभावित [अपडेट]
काठमाडौँ — त्रिभुवन विमानस्थल ७ बजेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ । शुक्रबार बिहान यति एयरलाइन्सको जहाज धावनमार्गबाट चिप्लिएपछि विमानस्थल बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल ड्युटी अफिर (टिडिओ) ले जनाएका छन् ।
सुरुमा साढे ११ बजेदेखि सवा १२ बजेसम्म नोटाम जारी गरेर विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि पनि चिप्लिएको विमान निकाल्न केही समय लाग्ने भएपछि सवा २ बजेसम्म नोटामको समय थप गरिएकोथियो। सवा २ बजेसम्म पनि जहाज निकाल्न नसकिएपछि ३ बजेसम्मलाई नोटामको समय थप गरिएको थियो। ३ बजेसम्म पनि जहाज निकाल्न नसकिएपछि ५ बजेबाट ७ बजेसम्मलाई नोटाम अवधि सारिएको छ।
चिप्लिएर घाँसेमैदानमा धसिएको विमान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ।
यतिको जहाज अवतरणको क्रममा रनवेबाट ट्याक्सी वेमा पुगेको छ। अवतरणको क्रममा यतीको एटीआर विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर २० मिटर पर पुगेको छ। यात्रु तथा चालकदलका सदस्यहरु सकुशल रहेका छन्।
विमानस्थलमा रहेका एक पाइलटले दिएको जानकारी अनुसार, यतीको एटीआर ११ बजेर ५ मिनेटमा अवतरण भएको थियो। अवतरण लगत्तै चिप्लिएपछि अन्य उडान अवरतण पनि रोकिएका थिए।
काठमाडौं आउँदै गरेका नौ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान डाइभर्ट भएका छन् भने काठमाडौंबाट उडान हुनुपर्नेदशवटाको उडान स्थगन भएको छ।
हाल बंगलादेशबाट आएको विमान भारतको दरभंगामाथिको आकाशमा होल्डमा फन्‍को लगाइरहेको छ भने दोहाबाट आएको कतारको जहाज भारततर्फ डाइभर्ट भएको छ।
विमानस्थल बन्द भएसँगै आन्तरिक र बाह्य उडान भर्ने तयारीमा रहेका जहाजको उडान प्रभावित बनेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा रहेका जहाजहरु डाइभर्ट भएका छन् भने केही जहाज होल्डमा छन्।
ती ड्युटी अफिसरका अनुसार चाइन एयर र सिचुवान एयर ल्हासा डाइभर्ट भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको दुबइबाट आएको जहाज दिल्लीडाइभर्ट गर्ने तयारी गरेको छ।
१७ हजार राष्ट्रसेवकलाई ५ हजार जरिवाना हुने
सीमा विवादले २ गाउँपालिकाबीच द्वन्द्व
बालबालिकामा कुपोषण बढ्दै
शरीरमा गोली, मनमा पीडा